Monthly Bonus ကို Garnier Essence ဘူး 1440 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Yu May Aung (FB000048) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Yu May Aung !!! June လအတွင်း Garnier Essence ဘူး 1440 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Super Bronze Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (6) သိန်းကျပ်တိတိနှင့် ???? Garnier Essence ဘူး (60) ဘူး နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို Nano ဘူး 700 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Yu May Aung (FB000048) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Yu May Aung !!! June လအတွင်း ဘူး 700 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Super Silver Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ???ငွေသား (6)သိန်း (3)သောင်းကျပ်တိတိပါ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။